Faytamiin B12 iyo Butafosfan Cirbad 100ml
Nooca: Fasalka Shanaad
Ciladaha Saameynta Farmacodynamic: Daawada isku dhafan
Habka Kaydinta: Kahortaga Tuurista Daawooyinka xoolaha ee dhacay
Baakadaha: Xidhmada: 50ml, 100ml, 250ml / dhalo
Wax soo saarka: 60000bottle / maalin
Goobta Asalka: Hubei, Shiinaha (Dhul Weyn)
Kartida Bixinta: 60000bottle / maalin
Faytamiin B12 Cirbadeynta Butafosfan
Butafosfan B12 Cirbadaha dardargelinta dheef-shiid kiimikaadka iyo xoojinta difaaca jirka.
Faytamiin B12 Butafosfan duritaanka
Qaab dhismeedka: 100ml kasta waxaa ku jira:Fitamiin B12
Maamulka iyo Qiyaasta:
Faleebo, cirbadeynta murqaha ama hypodermic:
Faraska, lo'da: 10-25ml markasta
Ido: 2.5-8ml markasta
Doofaarka: 2.5-10ml markasta
Eyga: 1-2,5ml markasta
Bisad, dhogorta xayawaanka: 0.5-5ml wakhti kasta.
kala badh qiyaasta xoolaha.
Xirmo:20ml, 50ml, 100ml / dhalo
1 Cilad-darrada dheef-shiid kiimikaadka daran: sida curyaannimada xoolaha dhediga markay umusho iyo cudur.
2 Cilladaha dheef-shiid kiimikaad ee joogtada ah: cudurka hore ee xayawaanka da'da yar, nafaqo-xumada, koritaanka ayaa xannibaya
3 Cillad-shiid dheef-shiid kiimikaad :: cilad-darrada, yareynta nuujinta, diiqadda, daciifnimada.
4 Cudurka 'Catalepsy' oo ay keento dhiig yaraan, daal.
5 Hagaajinta xasaanadda xoolaha iyo koritaanka xoolaha da'da yar.
6 In kor loo qaado murqaha iyo jirkaba tartanka, shaqada ama xoolaha la dhigo.
Butafosfan B12 Cirbadaha duritaanka ee dheef-shiid kiimikaadka iyo xoojinta xasaanadda,
waxay dardar gelin kartaa anabolism-ka jirka gudihiisa, waxay kobcinaysaa difaac; Faytamiin B12 wuxuu saameyn ku yeelan karaa dheef-shiid kiimikaad, karbohaydrayt iyo dufan. Waxay sidoo kale xoojisaa sameynta erythrocyte. Labadani waxay sameeyaan saameyn isku dhafan inta la wada adeegsanayo.
Badeecadan waxaa loogu talagalay nafaqo-xumada xoolaha, maaraynta korinta aan habboonayn iyo
cudursababay khalkhalka dheef-shiid kiimikaadka, dysplasia ee xayawaanka da'da yar, yareynta difaac iyo niyad jab.Waxay leedahay antioxidation xoog leh, feejignaan hoose, si wax ku ool ah u xakameysa autoxidation ee dufanka iyo kordhinta anabolismka qayb kasta oo ka mid ah jirka xayawaanka iyada oo la adeegsanayo habka kicinta jirka ee fudud, hagaajinta shaqada ee beerka, , hoos u dhig falcelinta walaaca.
Ma waxaad dooneysaa ku habboon Butafosfan B12 50ml Soo-saaraha soo-saaraha & alaab-qeybiye? Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo qiimo aad u fiican ah si aan kaaga caawino inaad hal-abuur yeelato. Dhamaan Duriinka Vitamin B12 100ml waa kuwo tayo leh oo la hubo. Waxaan nahay Shiinaha Asal ahaan Factory of duritaanka 50ml Butafosfan iyo B12. Haddii aad qabtid wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Qaybaha alaabta: Daawada nafaqada xoolaha> Butafosfan + Cirbadda B12
Butafosfan Iyo Vb12 Cirbadda Lo'da
Butafosfan Iyo Vb12 Cirbad